BARADHADA "LUCK": SHARAXAAD, SIFOOYIN, BEERASHO - BARADHADA
Baradhadu "Nasiib" way fududahay inay kala soocaan inta kale. Isaga muuqaal gaar ah waa wareega wareegga ama wareegga miraha oo ah midhaha dhexdhexaadka ah (120-250 g).
Maqaarka khafiifka ah wuxuu leeyahay midab fudud, midabkiisu sarreeya, oo mararka qaarkood noqda mid cufan leh oo gaaro hooska madow ee khafiifka ah. Kuwa digriiga ah ayaa si quruxsan loo qaabeeyey, si siman u taabashada, waxay leeyihiin tiro yaryar oo "indhaha" oo yaryar oo aan muuqan muuqaalka. Jirka waa jilicsan, kareemka midabka leh, qaabka la dhamaystiray wuxuu soo iibsadaa jilicsan jaale iyo jilicsan jilicsan. Noocyadaasi waa mid aad u liidata si ay u sameeyaan miro jilicsan, oo isla markaaba si fiican u ilaalisa qaabkeeda inta lagu jiro karinta ama shiilidda. Laga soo bilaabo taas oo aan ku soo gabagabeyn karno "Nasiib" waa mid caalami ah marka loo eego cunto karinta, tanina waa mid ka mid ah sharaftiisa.
Waxay ka kooban tahay 12% -14% istaarijirrada miisaanka guud ee baradhada.
Ma taqaanaa? In dabiiciga ah, waxaa jira laba nooc oo baradho ah, maqaarka iyo hilibka kaas oo leh midab buluug ah oo madow. Waxay ku sii jirtaa xitaa ka dib diyaarinta. Magacyadooda waa 'Linzer Blaue' iyo 'Französische Trüffel-Kartoffel'.
Baradhada Fortune ayaa sidoo kale lagu kala duwan yahay geeddi-socodka koritaanka: sida sifooyinka dibadda ee duurka ee noocyo kala duwan, waxay inta badan dhif u gaaraan cabbirka weyn, laakiin waxay yihiin qaro weyn iyo laaban. Caleemaha naftoodu waa caajis, rinji leh midab cagaaran oo qani ah. Blossom Blossoms ubax leh ubax cad oo leh dhirta adag ee adag.
Faa'iido kale oo aan la isku halleyn karin ee kala duwanaanshahan waa mid farbarasho horteeda dhammaan noocyada kala duwan ee carrada iyo la qabsiga degaannada cimilada ee kala duwan.
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada baradhada: "Gala", "Rosara", "Kiwi".
Ka hor inta badan fayrusyada iyo cudurada, baradhada laantu waa mid aan la isku hallayn karin ama leh celcelis u nugul. Waxay ka fiican tahay cudurada sida:
miraayada laysku qurxiyo;
celceliska u adkaysta ilaa dabaylo goor dambe.
Waa muhiim! Gaar aad u weyn, gaar ahaan kuwa ku beeraya baradhada iibka, waa awooda ay ku hayaan muuqaal daaweyn ah oo ka baxsan xitaa xitaa ka dib marka dhaawac jireed soo gaaro.. Miraha ma madoobaan oo ha kuulin, hartay cad cad oo soo jiidasho leh.
Awoodda baradhada "Luck" ayaa si joogta ah u sarreeya - mid hektar ah wuxuu keeni karaa ilaa hal iyo badh oo baradho ah.
Barandhada nasiibku waa nooca hore ee baradho, iyo haddii aad ku qanacsan tahay sharaxaadda dibadda iyo astaamaha noocyada kala duwan, waa wakhti aad ka fikirto goorta iyo sida loo beerayo si habboon beertaada.
First of dhan, markaad dooranayso meel beeritaanka nooc noocan ah ee baradho waa in la tixgeliyaa wareegta dalagga. Xulo goobta "saaxiibada" ee dhaqanka baradhada, taas oo ah, sideraatka ama digirta, sida phacelia, peas, digir, ama lupins, ayaa loo isticmaalaa in lagu koro.
Waxaan si adag kugula talinaynaa in laga beerto baradho si ay u beddesho yaanyada. Dhirta Kuwani waxay leeyihiin daciif ah cuduradaas, iyo geedahaaga cusub waxay halis ugu jirtaa inay ku dhacdo waxyaabo ka baxsan yaanyada. Iyada oo isla taxadar ah waa in loo qaato dhaqanka bidix.
Qaraabada baradho ah ee dalagyada bidixda ah waa yaanyada, ukunta, sunta, pepino, habeenkii madow.
Sida kor ku xusan, "Nasiib" gabi ahaanba ma aha mid ka soocaya nooca carrada waxayna diyaar u yihiin inay koraan oo ay midho u yeeshaan labada cagaaran iyo cufanba. Dhulka madow, jimicsi, cawska kaynta, cawska iyo peat-podzolic, iyo xitaa milshanka cusbada - mid kasta oo ka mid ah carradu waxay ku haboon tahay koritaanka caafimaad ee firfircoon ee baradhadaas.
Dhulka Ruushka, meelaha ugu guulaha badan waa:
Waa muhiim! DheecaanLitt iyo xaaladaha cimilada wanaagsan - kuwani waa arrimo aad u muhiim ah oo saameynaya dhalidda "nasiib wacan." Iyada oo ay u hoggaansamayaan, beergooyska ayaa si aan caadi ahayn u noqon kara mid kasta oo ciid ah.
Ka hor inta beerto baradho "Nasiib" hubso in ciidda ay horay diiran tahay, iyo aagagaaga aan lagu hanjabin qaboojin degdeg ah. Hoos-u-dhac xoog leh oo heerkulka dhulka ayaa yaraynaya tilmaamayaasha dhalidda dhowr jeer. Calaasyo kale: Ka hor inta beerto, digriiga bislaaday waa in sidoo kale loo kululeeyo. Uma baahnid in aad geedo geedo ah ka kicisid qolka qaboobaha: ha ku dhajiyaan qorraxda dhowr maalmood ka hor. Tani waxay hubin doontaa biqilka duurka iyo, si waafaqsan, sameynta miraha dhowr toddobaadyo hore.
Bilaabid soo saaridu waa u qalantaa ka dib 25-kii Abriil iyo illaa May 15marka ciidda yeelan doonto heerkul ugu yar + 8 C Si arrintan loo sameeyo, on sariiraha loo diyaariyey baradho ah, qodo godad ilaa si qoto dheer ah 10 cm.
Baro nafsad ahaanshaha tiknoolajiyada Dutch ee baradho sii kordhaysa iyo beeritaanka cows.
Waxa ugu muhiimsan waa in la fogaado inta u dhaxeysa. aan ka yarayn 20 cm, sababtoo ah baadiyaha waxay noqon doontaa lush: haddii ay farageliyaan midba midka kale - waxay yarayn kartaa qaddarka goosashada. Nidaamka degitaanka ee ugu fiican waa 30x60 sentimitir.
Baradho (ama qayb ka mid ah) ayaa lagu tuuraa ceel kasta oo daboolay dhulka. Markaas ka waraabiyey, loosen lakabka sare iyo sugto caleemaha ugu horeeya. Kadib 60 maalmood ka dib marka muuqaalka kore ee cagaarka koowaad ka sarreeya heerka dhulka, goosashada bislaada waxay diyaar u noqon doontaa. Waxay suurtagal noqon doontaa in aad cuntid baradho yar yar oo 45 maalmood ah.
Ma taqaanaa? Waxaa jira hab xariif ah oo sii kordhaya miraha barafka ugu horreeya. Tani, baradho, diyaar u ah biqilka, waxaa la dhigaa sanduuq leh balka iyo peat iyo si fiican u waraabiyey. Labo todobaad ka dib, warshad dhalinyaro oo si buuxda u dhisan ayaa lagu beeray dhulka. Si kastaba ha noqotee, waxaa haboon in la tixgeliyo in geeddi-socodka oo dhan uu waqti badan ku qaato.
Xeerarka daryeelka ee kala duwan
Fasalka "Luck" ma ahan mid ku filan oo aan u baahneyn shuruudo gaar ah ee koritaanka, laakiin wuxuu ku faraxsan yahay dareenka hoose.
Guud ahaan daryeelka barafku waa in si joogto ah iyo waqtigeeda jarjaridda iyo dabacsan ee ciidda.
Waraabinta waxaa si fiican loo sameeyaa inta lagu jiro muuqaalka kore ee cagaarka koowaad ee kor ku xusan heerka, inta lagu guda jiro ubax iyo had iyo jeer dhowr toddobaad ka hor qaangaarka ugu dambeeya midhaha. Waxaa fiican inaad ku shubtid biyaha ka yar duurka iyo inta u dhaxeysa sariiraha, iyo ma aha on top of geedka laftiisa. Ka dib markaad waraabiso, ha ilaawin inaad loosen lakabka sare ee dhulka, ka hortagida qolofka si aad u sameysid si ay dhulka u neefsadaan una noqoto mid qorrax leh. Sida quudinta, xitaa marka laga beero ceel kasta, waxaad ku ridi kartaa cantoobo of compost leh dambas. Dheeraad ah, marka la hayo sariiraha, waxaa suurtagal ah inay bacrimiyaan iyaga oo leh Bacriminta nitrogen.
Waa muhiim! Wixii noocyo baradho ah "nasiib wanaagsan" waxay noqon doontaa nus ku filan qeybta bacriminta ee lagu sheegay tilmaamaha. Haddii bacriminta uu aad u badanyahay Bacriminta nitrogen, hulaalka ballaadhan ayaa ka dhigi kara hul-yaraynta sababa.
Waqtiyada roobab daba dheeraaday, si ay u ilaaliyaan barafka laga bilaabo infekshanku soo daahay, waxaa habboon in la isku diyaariyo in lagu buufiyo fungicides sida Maxim, Metaxil, Ridomil Gold iyo kuwo kale.
Laga soo bilaabo Colorado baradho baradho ku caawin doona cuntada dadkatusaale ahaan:
Kalluubka ayaa ka baxaya budada, budada gypsum ama budada sibidhka. Habkani wuxuu wax ku ool yahay xitaa dirxiga ubucda.
Marmar dhawr jeer toddobaadkii iyadoo la isku darayo dubista dubista (300 g), khamiir (300 g) iyo biyo (10 l).
Kala mulin duurka u leh HOL (100 g) oo lagu qasi jiray toban litir oo biyo ah. Habkani wuxuu ka difaacaa dirxiga oo wuxuu quudiyaa geedka isla waqti isku mid ah.
Ama isticmaal waxyaabo warshadeed, sida "Ivanhoe" ama "Accord".
Si aan u soo koobo, waxaan jeclaan lahaa in aan qoro dhammaan faa'iidooyinka kala duwan ee baradhada "Luck":
Aragtida aadka u fiican ee digriiga waxay kala sooceysaa inta ka hartay indhaha kuwa ku beeraya baradhada iibka.
Maqaarka khafiifka ah ayaa suurtogal u ah in uu biskarro dhoobo oo la yareeyo khasaare yar oo mugga, taas oo calaamad u ah noocyada kala duwan ee dhaqaalaha.
"Nasiib" waxaa loola jeedaa noocyada hore ee baradho. Waxa uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya ee ka muuqda khaanadaha suuqyada iyo dukaamada.
Awoodda si ay u koraan oo si buuxda ugu horumaraan noocyo kala duwan oo ciid ah.
Kala duwanaanshahan waxaa lagu kaydin karaa waqti dheer xaaladaha ku haboon (tusaale ahaan, qaybta hoose), kaas oo u oggolaanaya iibsadaha ama dadka xaafadda deggan inay bixiyaan baradho tan iyo xilliga jiilaalka.
Faa'iidada ugu dambeysa iyo tan karaanka ee barafka "Luck" waa macquul ahaanshaha daryeelka ee geedi socodka koritaanka, iyo sidoo kale iska caabin ah tiro badan oo cuduro iyo cayayaanka.
Hadda, ogaanshaha dhammaan sifooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee baradhada "Luck", waxaad u badan tahay inaad rabto inaad noqoto milkiilaha dhowr sariirood oo khudraddan ah xagaaga xagaaga. U fududee inuu kuu daryeelo farxad, iyo dhadhan cajiib ah oo hodan ah ayaa farxi doona qoyskaaga oo dhan.